सम्बन्धविच्छेद लिएपछि कस्तो महसुस हुन्छ ? – Google pati
सम्बन्धविच्छेद लिएपछि कस्तो महसुस हुन्छ ?
१८ असार २०७६ ०६:०६
आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिन अगाडि बसेकी रचेल अचानक रुन थाल्छिन् । सन् २०१८ को त्यो दिन उनको घर अँध्यारो र शान्त थियो । सबैकुरा भिन्न थिए । २८ वर्षकी रेचल आफ्नो श्रीमान्सँग यसअघि यसै घरमा बस्थिन् तर अब उनी एक्लै छिन् ।
उनी बसेको घरबाट ३ सय २१ किलोमिटर टाढा उनका २६ वर्षे श्रीमान् रबको घर छ जो सरकारी वेबसाइटमा सम्बन्धविच्छेदका लागि सल्लाह दिइरहेका छन् । रबकी श्रीमतीले उनलाई एकवर्ष अघि छोडेर गइसकेकी छिन् ।
तर विश्वास टुट्दा सम्बन्धमा आएको गिरावट बढ्दै गयो र अन्त्यमा रेचल र रबले सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय लिए ।
तर त्यसका लागि पनि विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्यो ।
३१ वर्षकी रुबीले विवाहको दुई वर्षपछि आफ्नो श्रीमानसँग अलग्गिने निर्णय गरिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘म एक पारम्परिक परिवारकी हुँ जसले विवाहलाई धर्मसँग जोडेर हेर्छ । मेरा तीन बहिनीको विवाह भइसकेको छ । मैले आफ्नो श्रीमानलाई भेटेको एक वर्ष नबित्दै विवाह गरेको थिएँ । हामी दुई अलग व्यक्तित्व भएका भिन्न व्यक्ति थियौं ।’
रुबी भन्छिन्, ‘उनी धेरै कुरामा राम्रा थिए तर स–सानो कुरामा हामीबीच बहस र झगडा हुन्थ्यो । हामीबीच भ्रम अत्यधिक बढेको थियो । त्यसपछि एकदिन मैले उनलाई अन्य महिलासँग मेसेज गरिरहेको देखेँ । त्यो दिन मलाई लाग्यो कि हामी दुईले विवाह गर्नै हुँदैनथ्यो ।’
रुबीकी आमाले सम्बन्धविच्छेदको क्रममा छोरीलाई साथ दिइनन् । उनकी आमाले उनलाई उत्कृष्ट श्रीमती बन्न सुझाउँथिन् । रुबी आफ्नो घर छोडेर छुट्टै बस्न थालिन् ।
मनोवैज्ञानिक डाक्टर राहेल एन्ड्रयूका अनुसार जब तपाईंको वरिपरि निकै कम मानिस यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् भने तपाईंले एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ ।
रिलेशनशीप थेरापिस्ट र द ह्याप्पी कपल ह्यान्डबुकका लेखेक एन्ड्रयू जी मार्शल यो कुरासँग सहमती जनाउँदै भन्छन्, ‘सम्बन्धविच्छेदले सधैं तपाईंको आत्मसम्मानलाई ठेस् पुर्याउँछ । योबाट गुज्रनेहरुमा लज्जा र असफलताको भावना पैदा हुनु प्राकृतिक हो र यस्तो भावना त्यो स्थितीमा बढ्छ जब तपाईं वरिपरिका मानिसहरुबीच प्रेम देख्नुहुन्छ ।’
रेचल पनि साथीहरुसँग खासै भेट्न चाहन्नथिन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरा साथीहरु आफ्नो पार्टनरसँग राम्रो सम्बन्ध निभाइरहेका थिए । ती साथीहरुसँग समय बिताउन मलाई धेरै समस्या हुन्थ्यो ।’
डाक्टर एन्ड्रयू भन्छन्, ‘आफ्नो साथीबीच सबैभन्दा पहिले यदि तपाईंको सम्बन्ध टुट्छ भने भावनात्मक तनाव हुन्छ । रिस, डर, उदासी यी सबैले तपाईंलाई बारम्बार झस्काइरहन्छन् । तर तपाईंलाई जति धेरै जीवनको अनुभव हुन्छ त्यति नै तपाईं भावनालाई सही स्थानमा प्रयोग गर्न सिक्नुहुनेछ । तर नव जवानलाई यो बुझ्न समस्या हुनसक्छ ।’ बीबीसी